HomeChampions LeagueMonaco Oo Emirates Ku Dumisay Arsenal + Sawiro
Kooxda Faransiiska ah ee Monaco ayaa ku karbaashtay oo dabada dhulka ugu dhufatay kooxda Arsenal oo marti loogu ahaa garoonkeeda Emirates ee magaalada London, ciyaartii Is araga hore ee wareega 16 ka Horyaalka Naadiyada Yurub, Champions League.
Rajadii Gunners ee ahayd inay markii koobaad tan iyo sanadkii 2010 kii gaadho rubuc dhamaadka horyaalka Champion League ayay hadhaysay ceeryaan Madow kadib markii guuldaro lama filaan ah garoonkeeda ay Monaco kaga badisay 3-1.
Arsenal markii lagu beegay Monaco, waxay filaysay inay meel fudud ku hagaagtay si dhib yarna u dul mari doonto, laakiin rajadaasi waxay soo afjarantay markii kooxda Tababare Wenger lafteedii qarka loo saaray inay ku hadhayso wareega 16 ka oo ay adag tahay siday uga gudubtaa.
Gool uu qaybtii hore ee ciyaarta u dhaliyey Geoffrey Kondogbia ayaa kooxda martida ah u suurto galliyey inay hogaanka ku qabato nasashadiina u baxdo iyadoo fursadaas ku naaloonaysa.
Markii qaybtii dambe la isugu soo noqdayna , weeraryahankii hore ee naadiga Tottenham, Dimitar Berbatov ayaa u labeeyey Arsenal cirkana ku sii laalay rajadeedii.
Wallow ay wakhti dambe ahayd oo 90 kii daqiiqo lagu dhex jiray Alex Oxlade-Chamberlain ayaa Arsenal u soo celiyey gool aad u qurux badan ciyaartana 1-2 ka dhigay , waxase xaalku ku sii cakirmay daqiiqadihii lagu daray dhexdoodii markii weerar degdeg ah oo ay Monaco qaaday uu gool u bedelay ciyaaryahan Yannick Ferreira-Carrasco, ciyaartiina waxay ku dhamaatay 3-1 ay guusha kula hoyatay Monaco.
Arsenal ayaa laga rabaa inay ku badiso ugu Yaraan 3-0 is araga dambe ee martida loo yahay naadiga Faransiiska ah, si ay meel uga hesho rubuc dhamaadka Champions League.
Kilmarnock Oo Guul-darradii 2aad Oo Xidhiidh Ah U Xambaarisay Rangers
Bolivia vs Chile 1-0 Resumen Gol Eliminatorias 05/09/2017
AC Milan vs Bologna 2-1 – All Goals & Highlights